स्वास्थ्य र सौन्दर्य बिक्री को लागी फ्रेंचाइजी | फ्रेंचाइजी अवसरहरू Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»मिश्र»स्वास्थ्य र सौन्दर्य फ्रन्चाइजीहरू
फिचर गरिएको स्वास्थ्य र सौन्दर्य फ्रन्चाइजीहरू
पछिल्लो स्वास्थ्य र सौन्दर्य फ्रन्चाइजीहरू
पछिल्ला वर्षहरुमा स्वास्थ्य र सौन्दर्य सेवाहरु र उपचार को लागी एक उच्च मांग छ। किनकि यी दिनहरू मान्छेहरू ठीक देखिन चाहँदैनन् उनीहरू आफ्नो उत्तम देख्न चाहन्छन्। त्यसैले आज म तल केहि तथ्यहरु सूचीबद्ध गर्नेछु स्वास्थ्य र सौन्दर्य उद्योगको पूर्ण क्षमता देखाउन र लगानी गर्न पनि सही समय हुन सक्छ।
स्वास्थ्य र सौन्दर्य उद्योग को आसपास तथ्या .्क।
हामी अब स्वास्थ्य र सौन्दर्य उद्योग को लागी पहिलेका बर्षहरु बाट संकलन को लागी केहि तथ्या .्कहरु सूचीबद्ध गर्छौं। हाम्रो लक्ष्य स्वास्थ्य र सौन्दर्य फ्रेंचाइजीमा लगानी गर्न खोज्ने कसैलाई आश्वासन दिनु हो। किनकि समग्र बृद्धि वार्षिक रूपमा देखाउँदछ यो सामिल हुनको लागि एक रमाईलो उद्योग हो।
प्रत्येक व्यक्ति सौन्दर्य उद्योग मा व्यक्तिगत उपचार वा उत्पादन को केहि प्रकार मा लगभग 113 ११XNUMX वार्षिक खर्च गर्दछ।
स्किनकेयरको पूर्वानुमान गरिएको बजार वृद्धि विश्वव्यापी रूपमा २० मिलियन डलर हो।
२०१ 2018 मा, स्किनकेयर प्रमुख वर्ग थियो, विश्व बजारको लगभग percent percent प्रतिशत को लागी।
कपाल हेरचाह उत्पादनहरु लाई थप २१ प्रतिशत बनाइयो, जबकि मेकअपले २०१ 21 मा १ percent प्रतिशत बनाएको थियो।
कस्मेटिक बजारको मेक-अप सेयर विश्वव्यापी रूपमा एक विशाल %०% छ।
यो स्पष्ट छ कि स्वास्थ्य र सौन्दर्य क्षेत्रमा ठूलो मांग छ। स्वास्थ्य र सौन्दर्य फ्रन्चाइजी सुरू गर्न अब उत्तम समय छ।
यी तथ्या ?्कहरूले स्वास्थ्य र सौन्दर्य उद्योगको लागि के देखाउँछन्?
समग्रमा यी तथ्या show्कहरू देखाउँदछ कि स्वास्थ्य र सौन्दर्य उद्योग एक धेरै आशाजनक अवसर हो जुन धेरै विशाल र विविध ग्राहक आधारको साथ तपाईं विज्ञापन गर्न चाहानुहुन्छ विशेष गरी मध्यम आयु वर्गका व्यक्तिहरूलाई। किनभने तिनीहरू सबैभन्दा साप्ताहिक र वार्षिक रूपमा सौन्दर्य उत्पादनहरू र उपचारहरूमा खर्च गरेको पाइएको छ। त्यसोभए मुख्यतया तपाईले यी तथ्या from्कबाट टाढा लिन सक्नुहुन्छ कि उद्योगले निरन्तर आर्थिक बृद्धिका संकेतहरू देखाउँदै छ र सुन्दरता वा फेसन क्षेत्रमा जो कोही पनि छन् भनेर धेरै आशाजनक पूर्वानुमान गरिएको छ।
विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य फ्रन्चाइजी अवसरहरू के हुन्?
त्यहाँ दुई प्रकारका छन् जुन समग्र सौन्दर्य क्षेत्रमा जान्छ। सबैभन्दा पहिले त्यहाँ फेशन उद्योग हो जसले सामान, पोशाक, सूट जस्ता चीजहरूको लागि वार्षिक रूपमा पैसाको ठूलो रकम ल्याउँछ। उत्पादनहरू जस्तै यी र यस्तै। दोस्रो तपाईसँग सौन्दर्य उद्योग छ जुन केश उत्पादन, स्पा उपचार र ती लाइनहरु को आसपास को चीजहरु को रूप मा उत्पादनहरु छ। त्यसोभए तपाईले छनौट गर्नु पर्ने छ कि कुन तपाईको र तपाईको क्यारियरको लागि उत्तम हुन्छ। उदाहरण को लागी यदि तपाईसँग सौन्दर्य उत्पादन उद्योगको मोडेलि historyमा ईतिहास छ भने तपाईलाई क्यारियर पथका लागि आकर्षक लाग्न सक्छ।
तपाईंको आदर्श सौन्दर्य फ्रेंचाइजी फ्रन्चाइजेक अन्तर्राष्ट्रियमा खोज्नुहोस्।